Otú e si etinye music on iPod ịkpọgharịa
> Resource> iPod> Olee na-etinye music on iPod ịkpọgharịa
Obere na-atọ, iPod ịkpọgharịa bụ ezigbo music ọkpụkpọ. Iji tinye music ka iPod ịkpọgharịa, i nwere ike imeghe iTunes na mmekọrịta music gị iPod ịkpọgharịa. Ọ na-ese mfe na-adaba adaba. Otú ọ dị, mgbe syncing, ị ga-ahụ na aga na songs na gị iPod ịkpọgharịa na-arahụ. Gịnị ma ọ bụrụ na songs na gị iPod ịkpọgharịa bụ mbụ? Ida ha ruo mgbe ebighị ebi?
Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe banyere ya, ị nwere ike na-agbalị a - Wondershare TunesGo. Na a usoro, ị pụrụ itinye music on iPod ịkpọgharịa enweghị music ọnwụ. Mgbe music faịlụ-apụghị egwuri na gị iPod ịkpọgharịa, a usoro ga-tọghata ha ka ha dakọtara otu - MP3.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye a usoro na kọmputa gị
Na akụkụ n'okpuru, ga-amasị m ịme ka ị mfe nkuzi banyere otú tinye music ka iPod ịkpọgharịa. Nke mbụ niile, download na wụnye usoro na kọmputa gị. Nke a na usoro arụ ọrụ nke ọma na kọmputa na-agba ọsọ Windows 8, Windows XP, Windows 7 na Windows Vista.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPod ịkpọgharịa na kọmputa
Jikọọ gị iPod ịkpọgharịa na kọmputa site na eriri USB. Nke a na usoro n'ụzọ zuru ezu na-akwado iPod ịkpọgharịa 4, iPod ịkpọgharịa 3, iPod ịkpọgharịa 2 na iPod ịkpọgharịa 1. Nke a usoro ihe omume ga ngwa ngwa na-aghọta gị iPod ịkpọgharịa. Mgbe ahụ, gị iPod ịkpọgharịa ga-egosi na ihe bụ isi window ka screenshot egosi.
Nzọụkwụ 3. Tinye music ka iPod ịkpọgharịa
Ugbu a, n'okpuru gị iPod ịkpọgharịa ndekọ osisi, pịa "Media". Pịa "Music" n'elu akara. The music windo na-egosi na nri. Ugbu a, na-etinye music on iPod ịkpọgharịa, pịa "Tinye". Mgbe na-ahọpụta music faịlụ, ị kwesịrị ị na pịa "Open" ịgbakwunye music faịlụ gị iPod ịkpọgharịa. Ma ọ bụ, ị nwere ike pịa abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Tinye". Na esiri-ala ndepụta, ma họrọ "Tinye File" ma ọ bụ "Tinye nchekwa".
Mgbe music faịlụ nwere kedi formats, ị ga-enweta a Cheta. Pịa "Ee". Nke a na usoro-amalite iji tọghata ha ka ha iPod ịkpọgharịa dakọtara otu - MP3.
Ke adianade do, ị nwekwara ike ịgbakwunye listi ọkpụkpọ site na kọmputa na ọbụna iTune n'ọbá akwụkwọ gị iPod ịkpọgharịa. Pịa "Playlist" ke depụtara n'aka ekpe n'igbe iji bugote playlist window. Mgbe ịpị abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Tinye", ị ga-abụọ nhọrọ na esiri-ala menu: "Tinye iTunes Library" na "Tinye Playlist si Computer". Pịa ma nke ha ka ha tinye listi ọkpụkpọ iji iPod ịkpọgharịa.
E wezụga na-etinye music ka iPod ịkpọgharịa, ị nwekwara ike mbupụ music si iPod ịkpọgharịa ka iTunes na kọmputa.
Otú nyefee faịlụ site PC ka iPad
Otú nyefee Music si iPod ịkpọgharịa ka Computer
Otú e si etinye Music on iPod enweghị erasing Ihe ọ bụla
Otú e si etinye Podcast on iPod
Video ka iPod Ntụgharị - tọghata Video ka iPod
Nhicha ihe iPod - otú ihe mere nke Ọ
Nzọụkwụ dọwara Music si iPod ka Computer
Otú nyefee Non zụrụ Music si iPod ka Computer
Olee otú iji tọghata AVI ka iPod
Olee otú Naghachi Music si iPod
Olee otú Mee iPod ngosi mmịfe na Watch ngosi mmịfe on iPod